ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ: စွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း။ Dr. Charlotte Loppie၊ ဗစ်တိုးရီးယားတက္ကသိုလ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းပါမောက္ခ (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn
အဘယ်မှာကျနော်တို့အင်တာနက်-အစွဲအလမ်းယဉ်ကျေးမှု၌သုံးရင်နှင့်စွဲအကြားလိုင်းဆွဲသလဲ? Charlotte Loppie တစ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းအတွက် UVic ပါမောက္ခ, လူမှုရေးပေါ်လစီများနှင့်အခြေပြုဘော်ရီဂျင်နီကနျြးမာရေးသုတေသနမကြာသေးမီကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုရန်ကြောင့်ဆက်ဆံရေးအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ကိုရှာကြံအထီးကျောင်းသားအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးသတိထားမိလိုက်ပါတယ် ။
လက်တွေ့အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ၏ "လျင်မြန်စွာမီးဆွ" တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်နှိုးဆွဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုသူများအရွက်သောကြောင့်, အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း "နောက်ဆုံးမှာပစ္စည်း desensitizing" နိုင်ပါသည် Loppie, ရှင်းပြသည်။
ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာအမှု Self-ကွှေးကျွော porn စှဲလမျးသူနှင့်စွဲနှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအားပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအကြောင်းကို Loppie ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူကိုစတုတ္ထနှစ်ကို Creative Writing အဓိက, က Spencer Thompson ကဖြစ်ပါတယ်။ Loppie Thompson ကတိကျစွာ Thompson ကန့်ကဲ့သို့အမှုနှင့်အတူသူမ၏ပထမဦးဆုံးတှေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့်, ဖြည့်စွက်ပြောပါတယ် "ငါသည်ဤအတူရုန်းကန်ကြသူနှစ်ပေါင်းငါ့ကိုဆက်သွယ်ကျောင်းသားများကိုခဲ့ပါတယ်။ "
Thompson က porn ၌သူ၏အကျိုးစီးပွားအဆင့် 10 စတင်ခဲ့သူသည်စွဲလမ်းမှပင်ဆင်းရဲဆက်လက်ကြောင်းကိုရှင်းပြထားသည်။ "ငါသည်နေဆဲရုန်းကန်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "မဆေးတစ်လက်ရှိပါတယ်။ "
"တစ်ခါတလေငါရှစ်ဆယ်ရာမှတစ်ဦးသည်ဆိတ်ခဲ့အလိုရှိ၏။ သူတို့က [ကွန်ပျူတာများ] နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ "
၏တစ်ဦး 2015 volume ထဲမှာ ဥပဒေ & နိုင်ငံရေး၏တက္ကဆက်ပြည်နယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအလက်ဇန္ဒရားဆန်ဆင်ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုတွင်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ပြီးယင်းကအခြားစွဲလမ်းမှုများထက်အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ American Bar Association (ABA) သည်လိင်အကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသူအားစွဲလမ်းစေသည့်မည်သည့်လိင်အပြုအမူမှမမှီခိုမှီခိုအားထားမှုအဖြစ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏။
သူ၏ "အမှောင်" ကာလ၌, စောင့်ကြည့် porn Thompson ကရဲ့အသက်တာ၌သာပျော်ရွှင်မှုကိုပေး။ သူကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကျောင်းက skip ဖို့အသုံးပြုများနှင့်နောက်ဆုံးမှာအလားအလာရင်ခုန်စရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလိင်နှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုဆက်သွယ်ထားသော၏နိုငျဖြစ်လာခဲ့သည်။ "[ငါ] ကတိုက်တွန်းကြသည့်အခါ, ငါ၏သတိစိတ်ကိုဖွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှိသမျှကိုငါခန္ဓာကိုယ်ကလှုံ့ဆော်တယ်," Thompson ကပြောလိုက်ပါတယ်။
Harrison ထဲမှာဆက်ပြီး တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: "အဆိုပါ ABA, နေစဉ်နှင့် '' အတွက်အဆက်မပြတ်, ဇွဲနှင့်ဆက်လက် compulsive လိုအပ်ကြောင်း, 'ထက်တိကျတဲ့လုပ်ရပ်များက' စွဲဖွံ့ဖြိုးခြင်း, စှဲလမျးသူအတူတူထဲကဓာတုပစ်စညျးအလုအယက်, ထုတ်လုပ်ရန်ပိုပြီးမကြာခဏသို့မဟုတ် riskier အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ် '' ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု အဆိုပါစွဲမှတ်။ "ဟုအဆိုပါဆန္ဒပြည့်မရှိတော့ se နှုန်းလိင်အကြောင်းကိုပေမယ့်စောင့်ကြည့်အွန်လိုင်း porn ၏တိကျသောလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုဖြစ်လာဒါ။
[ယခင်အမျိုးအစား] တော့ဘူးသင်တို့အဘို့ကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြောင့် "သင်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းပစ္စယမှအပေါ်ကိုရွှေ့။ ။ ။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ, သင့်သြတ္တပ္ပစိတ်ကြောင့် [ရွားလှအကြောင်းအရာ] င်ဟုဖြစ်ပါတယ် "ဟု Thompson ကရှင်းပြသည်။
ဘီစီ၏စွဲသုတေသနများအတွက်စင်တာ (CARBC) ၏အမ်မာ Carter ကအဆိုအရမျှသုတေသနလက်ရှိတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစွဲနှင့် ပတ်သက်. အမှုကိုပြုလျက်ရှိသည်။ အဖြစ်လုံလောက်သောသုတေသနဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြားနား, ညစ်ညမ်းအသစ်ကိစ္စများနောက်ကွယ်မှကျန်ရစ်။ အဘယ်အရာကိုမျှမျှတတကောင်းစွာတည်တတ်၏အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွေ့အကြုံများအကြားသွေးခွဲသည်။ "လူအပေါင်းတို့သည်ငါ့နှစျမြားတှငျ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်] ငါအမျိုးသမီးတစ်ဦးလို့ပြောကြားသိဖူးပါဘူး [သူမကရဲ့] [သူမက] အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမရနိုင်အောင်အများကြီး porn watched" Loppie ကပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာဒံယလေသ Linz ရဲ့ 2007 စာအုပ် အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အတိုက်အခံ Viewpoint "ဒီလို '' လိင်စှဲလမျးသူ 'သို့မဟုတ်' 'ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူ' 'အဖြစ်တံဆိပ်များမဆိုသစ်ကို syndrome ရောဂါအပေါ်အလင်းကိုသွန်းထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျားမအခန်းကဏ္ဍအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးပြောပြလိမ့်မည်။ " အဲဒီစောဒကတက် Linz အချို့, "လိင်စွဲ" အဖြစ်ရောဂါရှိသူများကတည်းကအချိုးမယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု သုတေသီများ Hyper-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယောက်ျား၏လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မျှော်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်အကျွံမှတဆင့်၎င်းတို့၏ပုလ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ယောက်ျားဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါယုံကြည်ပါတယ်။
Harrison ရဲ့အဆိုအရအထီးလိင်၏အသစ်အဆန်း-ရှာကြံဒြပ်စင်အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ "Coolidge Effect," လတ်ဆတ်တဲ့အင်တာနက်လှုံ့ဆော်မှု၏အဆုံးမဲ့ရေကူးကန်အထီးစွဲလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်စံပြကြောင်းဆိုလိုသည်။
စွဲမှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိသို့သော် Loppie မေးခွန်းများကို။ "ငါသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ [ဒါခေါ်အွန်လိုင်း porn စွဲနှင့်အတူ] မြင်နေပါတယ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအချို့သောအမျိုးအစားသုံးရင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ "
မည်သို့ပင်အချို့သောအွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသုံးရင်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှပင်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုဖြေရှင်းရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ 2011 ခုနှစ်, NoFap လို့ခေါ်တဲ့ subreddit ပေါက်နှင့်နောက်ဆုံးမှာ app တစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ YourBrainOnPorn.com ဟုခေါ်တွင်နောက်ထပ်က်ဘ်ဆိုက် porn ၏သိပ္ပံနည်းကျသက်ရောက်မှုအပေါ်သုံးစွဲသူများကပညာပေးနှင့်သုံးစွဲသူများ 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းကြဉ်ရှောင်ဘယ်မှာ Reboot လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။ Thompson ကအဆိုပါ Reboot ဖြစ်စဉ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အွန်လိုင်း porn ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆုံးအတွင်းသူ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းအတည်ပြု။
, သင်အွန်လိုင်းအချို့သောလိုက်တယ် [ပစ္စည်းပစ္စယ] မြင်နေပါတယ်ရင်တောင် "[နဲ့] သင်ဘာထင်: Thompson ကသူတို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက် overindulge စခွေငျးငှါစိတ်မပူပါနဲ့သောသူတို့အဘို့အခြို့သောအကွံဉာဏျပေးထားပါတယ်။ ။ ။ သင်ပယ်ရှင်းအရှိန်မြှင့်သည်အထိငါစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုစေမှာမဟုတ်ဘူး, သို့အမှန်တကယ်ပါပဲ။ "
သင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစွဲစေခြင်းငှါထင်ရှိလျှင်, UVic တိုင်ပင်မှူးမတ်ကိုကူညီရရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိအတှေ့အကွုံမြားအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် Thompson ကရဲ့ blog ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု: spencerthomp.wordpress.com
By Cayden ဂျွန်ဆင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2016